PressReader - Isolezwe: 2018-02-14 - UKhama Billiat usethole imenenja entsha
Izolo ekuseni sithole izindaba zokuthi uBilliat usethole i-agent entsha. UBilliat usejoyine i-M-SportManagement kaMichael Ngobeni.
“UKhama usejoyine i-MSport-Management eholwa nguMichael Ngobeni. Seneme futhi inkampani yethu yenza kahle. Sizolwela ukwenza isiqiniseko sokuthi senza yonke into ngendlela eqondile ukuze senze uKhama ajabule. Kusuka manje zonke izindaba ezithinta uKhama sezizokwamukelwa yi-M-Sport Management.
“UKhama uke waqokwa njengomdlali wesibili ovelele kwabadlala e-Afrika. Cishe ungumdlali ohamba phambili eNingizimu Afrika yonkana. Seneme ngokuphatha izindaba zomdlali ofana noKhama. Ukuphatha umdlali ofana noKhama kuyinto enkulu. “Njenge-agent kuyisifiso sanoma ngubani ukuphatha uSaido Mane, Lionel Messi noYaya Toure. Okwamanje ngeke sikwazi ukuphatha uMessi kodwa kungcono ngoba sinoMessi wethu kuKhama futhi kumele senze isiqiniseko sokuthi simgcina ejabule. Kumele simsize afeze amaphupho akhe,” kuphetha uNgobeni.
UMICHAEL Ngobeni (kwesokunxele) emukela ngokusemthethweni uKhama Billiat weMamelodi Sundowns osezophathwa yinkampani yakhe (uNgobeni) Isithombe: SITHUNYELWE